LG G4, nhọrọ na-adọrọ mmasị n'ime oke elu | Akụkọ akụrụngwa
Villamandos | | Mobiles, Nyocha
Mgbe ihe ịga nke ọma rụzuru na LG G3, LG amaliteghachiri ngwaọrụ mkpanaka ọhụụ nke ọ jiri dị ka LG G4 na nke ọ na-ejigide nhazi nke natara oke otuto site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ niile, na-emekwa ka uru na nkọwapụta ka mma. Na LG G4 a, anyị na-eche ihu na a ọnụ na-atọ ụtọ nke nnukwu elu, nke nwere ike ịlafu ụfọdụ nkọwa iji merie ihe atụ na Samsung Galaxy S6 Edge na anyị nyochara ihe omimi ụbọchị ole na ole gara aga.
Taa na ekele LG Spain anyị ga-enwe ike nyochaa nke ọma LG G4 ọhụrụ a ma wepụta nkwubi okwu mgbe ejirila ya ụbọchị ole na ole dị ka mkpanaka nke onwe, ahụmịhe m nwere ezigbo obi ụtọ, n'agbanyeghị na echere m na m ga-eme azụọla ya. maka nkọwa dị iche iche. Can chọrọ ịmata ihe ha bụ? Can nwere ike ịga n'ihu na-agụ ihe ruo ọgwụgwụ ma ị ga-ekweta na m.
4 Igwefoto, otu n'ime ike nke LG G4 a
5 Batrị ahụ, nnukwu ebe ojii
6 Ahụmahụ nke m mgbe ọnwa otu ojiji
7 Nnweta na ahịa
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-amalite site na ile anya na atụmatụ nke ama a, nke nwere ihe ịga nke ọma, mana ọ nwere isi ọjọọ. Ma ọ bụ na ọ bụrụ na anyị anya enweghị ọnụ ọnụ mpi, nke a na-akpọ elu-ọgwụgwụ, agwụla na plastik. Imirikiti na-eji ihe eji ọla eme ihe na ụfọdụ ọbụna iko. Na nsụgharị kachasị mkpa anyị ga-edozi maka plastik nke na-adịghị enye echiche nke ịbụ ihe ọzọ, ị nwere ike ịhụ site n'ebe dị anya na ọ bụ plastik.
Na nsụgharị nke mkpuchi azụ ya bụ nke akpụkpọ anụ, ihe na-akawanye mma nke ukwuu, mana na-aghọghị ihe ọ bụla nke ụwa ọzọ na plastik ahụ ka dị. Na mgbe anyị na-akwụ nnukwu ego maka ama, ihe anyị achọghị bụ ka emecha ya na plastik.
Ihe ndi ozo di ka na LG G3 obere ihe ngosi, nke ahu bu Anyị agaghị ahụ bọtịnụ ọ bụla n'akụkụ ngwaọrụ ahụ, ma ha niile na-etinye uche na azụ, ihe dị mma nke ọma ozugbo ị jiri ya. Na ihu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile bụ ihuenyo, akụkụ ya dị warara.
Ọ bụrụ na anyị ga-enye atụmatụ ahụ akara site na 0 ruo 10, m ga-enye ya 6, na-ebelata ọtụtụ akara maka ihe eji eme ihe na maka akụkụ nke mkpuchi azụ, nke m na-agaghị aghọta nke ọma na nke na-eme ka njedebe na-akwagharị oge ọ bụla ị tinyere ya n'elu.
N'ebe a, anyị na-egosi gị njirimara na nkọwa nke LG G4 a;
Akụkụ: 148 × 76,1 × 9,8 mm
Ihuenyo: 5,5 sentimita asatọ IPS nwere mkpebi nke 1440 × 2560 pikselụ
Ihe nhazi: Snapdragon 808, 1,8GHz isii isi, 64-bit
Ebe nchekwa RAM: 3GB
Nchekwa ime: 32GB dị ka ohere iji gbasaa ya site na iji kaadi microSD
Ndị kamera: 16 megapixel azụ na laser auto-focus, OIS 2 f / 1.8. 8 megapixel n'ihu igwefoto
Sistemụ arụmọrụ: 5.1 Lollipop Android
Nwere ike ịlele atụmatụ ndị ọzọ na nkọwapụta na LG G4 faịlụ anyị nwere ike ịchọta na weebụsaịtị LG nke ị nwere ike ịnweta site na njikọ ahụ anyị hapụrụ gị na njedebe nke isiokwu a.
N'ime LG G4 a, anyị na-ahụ ihe nhazi Snapdragon 808, nke anyị nwere ike ịkpọ dị ka ahịrị nke abụọ na ọ bụ na ọ bụghị ụdị kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Qualcomm na na dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na anyị nọ na HTC One M9.
Anyị achọghị ịta onye nhazi ahụ, mana Ee, anyị achọpụtala na n'oge ụfọdụ, ọdụ a na-adọrọ adọrọ, ọ bụ ezie na a ga-eche n'echiche na LG arụworị ọrụ na idozi akụkụ a site na ụfọdụ ngwanrọ ngwanrọ nke kwesịrị ịdị n'oge na-adịghị anya.
Ọbụna na ihe niile, echegbula onwe gị banyere obere nkọwa a, ebe ọ bụrụ na ị ga-enye ya nkịtị, na-enweghị ịpịpụta LG G4 a ruo n'ókè a na-atụghị anya ya, ị gaghị ahụ nsogbu ma ọ bụ lag.
Ncheta RAM bụ otu n'ime ndị omempụ na ọ nweghị ndị ọrụ "nkịtị" ga-ahụ ihe ọ bụla dị iche na nke ahụ bụ na 3GB nke RAM nwere ike nke ihe niile.
Banyere nchekwa dị n'ime, anyị na-achọta otu ụdị 32GB nke, agbanyeghị, enwere ike ịgbasa site na iji kaadi microSD, nke ka bụ nnukwu uru ebe ọ bụ na, belụsọ na enwere, maka oge ahụ, ụdị ndị ọzọ nwere nchekwa dị elu karịa nke a enwere m ike ịbụ nsogbu maka ụfọdụ ndị ọrụ.
Igwefoto, otu n'ime ike nke LG G4 a
Ọ bụrụ na ndị nhazi ahụ bụ otu n'ime ntụ ojii nke LG G4 a, Igwefoto ya bụ otu n'ime ike nke ọdụ a na nke anyị nwere ike ịsị na ọ dị ka ndị kachasị mma n'ahịa yana nke Samsung Galaxy S6.
Ojiji, ohere ịmezi aha ya, ịdị nkọ nke ọ na-enye anyị, nkwụsi ike nke onyonyo ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa bụ ụfọdụ ihe dị mma nke igwefoto a. Na mgbakwunye, enwere ike iji igwefoto na ntuziaka ntuziaka bụ ihe anyị na-agaghị echefu ma ọ ga-abụ ezigbo ngọzi maka ọtụtụ ndị ọrụ na-anaghị ahụ ohere a na ngwaọrụ mkpanaka ndị ọzọ na ahịa.
Anyị ga-egosikwa na ihe onyonyo ndị a gbara n'ọchịchịrị zuru oke ma ọ bụ nwere obere ọkụ nwere oke mma ma karịa ihe niile anyị nwere ike ikwu na ha na-eweta ezi agba, dị nnọọ anya site na ndị ọzọ enwetara na ọdụ ndị ọzọ n'ahịa ma na-eme ihe onyonyo adịghị anya ọ bụla dị ka eziokwu na niile.
Lee, anyị gosiri gị a nnukwu ihe osise nke ihe oyiyi ejiri LG G4;
Batrị ahụ, nnukwu ebe ojii
N'agbanyeghị eziokwu ahụ LG kwughachiri puku ugboro na batrị abụghị nsogbu na LG G4 a, Ahụmahụ anyị adịtụla iche na ọ bụ na anyị enweela oge ọjọọ, ruo ọtụtụ ụbọchị iji ruo na njedebe nke ụbọchị, na kwa inye oke oke na njedebe.
na 3.000 mAh nke batrị ya yiri ka ha nwere ike zuru ezu, mana ọ gwụla ma onye ọrụ ọ bụla "na - eme ihe ike" na njedebe, ma ọ bụ tinye maka ihe atụ ọtụtụ ngwa maka m ha abụghị. Echere m na ha abụghị maka onye ọ bụla, n'ihi na mgbe LG na-enye anyị ohere ịgbanwe batrị mgbe ọ bụla anyị chọrọ ya bụ n'ihi na ọ nwere ike ịtụ ụjọ na otu ihe ahụ ga-eme LG G4 a dị ka onye bu ya ụzọ nke na-eripịa batrị ahụ mgbe niile.
N'ezie, ọ dị mma imesi nke ahụ ike LG G4 a na-enye anyị ohere nke ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa yana oge ọ na-ewe iji kwụọ ụgwọ njedebe ahụ pere mpe, nke bụ ngọzi ebe ọ bụ na ọ bụrụ na mgbakwunye na batrị ahụ na-agba ọsọ n'oge na-adịghị anya, ọ gaghị enwe onye a, ọ ga-eme na-ewe oke iwe.
Ahụmahụ nke m mgbe ọnwa otu ojiji
Dika m gwaworo gi na vidiyo nke na-ebute isiokwu a, LG G4 abughi ihe omuma m maka ojiji nke onwe m otu ọnwa na obu ezie na enwere otutu isi ihe m kwesiri igosi, Ahụmahụ ahụ dị ezigbo mma ma dị mma, ma ọ bụrụ na m ga-ahọrọ ngwaọrụ mkpanaka site na nke a na-akpọ njedebe dị elu, ma eleghị anya, ọkwa LG ga-abụ nhọrọ m mbụ..
N'ime ihe ndị dị mma m ga-eme ka igwefoto pụta ìhè karịa ihe niile, nke ahụ bụ na ọ na-enye anyị ohere nke ise foto nke oke mma, yana uru anyị nwekwara ike iji igwefoto na usoro ntuziaka, nke bụ ezigbo ngọzi, dịka ọ bụrụhaala na ịmara otu esi eji ya, nke anaghị adị mfe.
La ihuenyo, nke na-enye anyị ezigbo nkọ na ezigbo agba bụ ihe ọzọ dị mkpa nke LG G4 a. Na mgbakwunye, enwere ike iwepu batrị ahụ, mgbe ọ dị mkpa ịgbanwe ya maka nke ọhụrụ, yana ịgbasa nchekwa dị n'ime site na kaadị microSD gburugburu ozi ọma ahụ.
. Nke mbụ bụ batrị ya, nke doro anya na ezughi oke maka njedebe dị elu, ọ bụkwa na mgbe ị nọ ezumike, ebe ọtụtụ ozi ịntanetị na-abata na n'ozuzu, ọbụlagodi na m na-eji obere smartphone eme ihe, ọ bịarute na njedebe nke ụbọchị.
Nhazi ya bụ ihe ọzọ n'ime ihe ndị na-amasịghị m ma ọlị na nke ahụ bụ na m aghọtabeghị akụkụ azụ nke azụ nke na-eme ka ọ na-efegharị mgbe etinyere ya na mbara ala.
Nnweta na ahịa
LG G4 dị na ahịa maka izu ole na ole ugbu a, maka ọnụahịa nwere ike ịdị iche na-adabere na azụ azụ anyị chọrọ. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị njikọ iji nwee ike ịzụta na Amazon tinyere ọnụahịa ha dị ugbu a;
LG G4 Titanium - euro 530 LG G4 Red - euro 575 LG G4 Black - euro 579
Buru n'uche tupu ịzụrụ ọdụ a na ọtụtụ ụlọ ọrụ na ụlọ ahịa na-enye ya na onyinye, yabụ nkwanye anyị bụ ka ịchọọ netwọkụ ahụ nke ọma maka ụlọ ahịa ndị ahụ ga-akwụ anyị ụgwọ onyinye, nke ọtụtụ oge karịa naanị ihe efu.
Kedu ihe ị chere banyere LG G4 a?.
Igwefoto foto nke na-enye anyị onyonyo mara oke mma
Akụrụngwa na imewe eji
Processor dịtụ ochie
Ozi ndị ọzọ - lg
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » LG G4, nhọrọ na-adọrọ mmasị n'ime oke dị elu